Maherin'ny 50 karazana ny kajy. Ny esory kajy fototra, ny haben'ny ny peta-drindrintsika, hazo tohatra. Building fanaovana kajy.
Kajikajy ny fitaovam-panorenana, fanorenana calculators, sy mpamorona
Fefy, rindrina, gorodona
Boky sy ny fahaiza-
About ny tetikasa
Nanenjika ny fanorenana ny trano toetsika foana aho miatrika ny kajy ny habetsaky ny fitaovana na ny kajy ny habe amin'ny famolavolana manokana antsipirihany.
Manapaka birao, hazo na hazo hafa ny asa fanorenana - araka ny ilaina amin'ny rindrina na ny gorodona?
Heaters mila tsy tapaka ihany koa ny kajy. Dia izany mineraly volon'ondry, sombin-javatra na insulation hafa. Rehefa nanoratra, ny famolavolana ny trano taolana ary fiarovana fitaovana ampiasaina insulation aho, tsy ny tany sy ny tampon-trano, ary ny rindrina.
Tafo - tantara iray hafa. Ny tampon-tranoko sarotra ny endriny, ary manao kajy ny habetsahan'ny vy shingles na fitaovana hafa dia sarotra tafo. Na izany aza anefa dia tsy maintsy tafiditra ao ny fako ao amin'ny tafo. Ary misy ny trano nandritra ny taona maro miaraka amin'ny tafon'ny tafo fitaovana.
Ny vanim-potoana manaraka, mba ho mitandahatra ny rindrina. Koa nihevitra ny tenany siding, zavon'ny sakana ...
Ny olona iray tsara ilay sekoly alijebra Mazava ho azy fa tsy kajikajy ireo ho sarotra. Makà taratasy sy ny fanaovana kajy, tsarovy ny raiki-pohy, jereo roa fotoana ... Ary jereo ... Fa ny kajikajy tsy mitondra fahadisoana tafiditra tsy ilaina ny vola lany. Fitaterana, raha hividy zavatra bebe kokoa, na ny mifamadika amin'izany amin'ny loatra, mora ny asa tsy dia tsara, sy ny sisa.
Dia teraka ny hevitra mahazatra izany ireo kajikajy eo amin'ny soroky ny fandaharana fa ny rehetra no mihevitra sy manao sary.
Fa ny tena zava-dehibe - tsy manao fahadisoana! Raha ny marina, ny vola lany ny tsy fahombiazana loatra mandritra ny fanorenana avo.
Manantena aho fa ny fanompoana no manampy ireo izay trano miaraka amin'ny tanana sy ny fahaiza-manao-mpanao trano.